N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ebumnuche nke ngwungwu elektrọnik bụ iji jigide iguzosi ike n'ezi ihe na gburugburu oke oge ma n'otu oge na-eme ka ntinye ntinye anya dị ala. Jitai na-arụpụta ngwungwu opto-elektrọnik na ụdị na nha dị iche iche nke ọtụtụ nhọrọ opto-channel na-emewanye iche. Anyị na-ahọrọ site na ọtụtụ ndị na-akpụ ma na-echepụta ụzọ iji dabara adaba maka mkpa ngwaahịa.
A na-akwado ngwugwu ike maka ọrụ ebe oke mgbasa ọkụ dị oke mkpa. Na mkpokọta Jitai na - eji igwe onodu onu ogugu kọmputa (igwe CNC) maka ulo eji eme ulo. Otú ọ dị, anyị nwere ọtụtụ nhọrọ nhọrọ ngwá ọrụ nke na-enyere anyị aka ịmepụta na ịmepụta nhọrọ dịgasị iche iche nke nchịkọta ọdịnala iji kwado ihe ọ bụla. Ihe bara uru nke ngwugwu ike bu ihe ndi eji agbanwe agbanwe, uzo di nkenke maka imeputa ihe, na ntukwasi obi di omimi na gburugburu ebe obibi ...
Ihe ndekpọ Microwave bụ akụkụ dị mkpa nke ihe anyị na-eme na Jitai. Anyị na-ewepụta ngwugwu RF dị iche iche nwere ike dị iche iche. Ngwunye Jitai na-achọpụta na ihe achọrọ maka ogo dị elu, ike ọkụ, yana hermeticity niile nwere afọ ojuju na azịza dị oke ọnụ. Anyị nwere ụlọ ọrụ iji chepụta ma rụpụta nke ọma ahaziri iche maka ụdị ahịa niile. Jitai na-ụlọ plating ngalaba ike nke ma electroless na electrolytic Filiks na-enyere anyị aka contr ...
Jitai sara mbara nke ngwugwu maka Hybrid Integrated Circuits gụnyere ngwaahịa dịka ikpo okwu na ngwugwu sidewall. A na-emepụta ụlọ ndị dị n'èzí site na stampụ igwe, nke nwere uru nke arụmọrụ dị elu ma ya mere ọ dị mma maka ịmepụta oke. A na-adọta mkpọ na-esite na ala, na-abụkarị n'usoro okpukpu abụọ ma ọ bụ ndokwa anọ, nke kwesịrị ekwesị maka ntinye nkwụnye. Ejiri ngwungwu Dual Inline (DIP) ma ọ bụ Quad Inline nchịkọta mekwara maka nkwụnye ihe ...
Nchịkọta Alloy Aluminium Nkọwa nkenke: Uru nke alloy alloy bụ ịdị arọ ya, ike siri ike, na ịdị mfe nke nwere ike ịkpụzi. Dị ka ndị dị otú ahụ ọ na ọtụtụ-eji na n'ichepụta nke electronic nkwakọ. Isi atụmatụ: High kwes conductivity • Low njupụta • Good platability na workability, waya ọnwụ, egweri na elu gold plating nwere ike rụrụ. Nlereanya Nlereanya nke mmụba zuru oke / × 10-6 / K KWES THRER KWESERR / KWES /R / / W · (m · K) -1 njupụta nke / g · cm-3 A1 606 ...
N'ozuzu TO Nchịkọta, nke a makwaara dị ka ngwugwu Transistor, bụ akụkụ abụọ; a TO nkụnye eji isi mee na a okpu. Akụkụ nkụnye eji isi mee na-achọpụta na ihe ndị mechiri emechi ya na-enweta ike ebe okpu ahụ na-eme ka nnyefe nke akara ngosi. Nchịkọta ga-etolite azụ maka ịwụnye ọtụtụ ngwa anya na ihe elektrọnik sitere na elektrọnik elektrọnik di nkpa ruo na semiconductors Ihe nchoputa nke anaputara site na ulo na-enye ike na componen akara ...
Ewubere iji guzogide oke gburugburu, ngwugwu okirikiri Jitai, nke a makwaara dị ka njikọta hermetic, nwere ọtụtụ ngwa a na-akparaghị ókè. Site na mbara igwe ruo n'oké osimiri, anyị na-enye ngwọta dị iche iche na ahaziri ahazi maka ọtụtụ nsogbu ịma aka njikọ. Anyị na-arụ ọrụ nke ọma na iko na seramiiki nwere akara okirikiri nke na-eme ka elektrọnik nwere mmetụta dị na ngwugwu ahụ ka echedoro ya site na njirimara mmebi nke ikuku ụwa na gafere. Jitai na-eduzi ...
Isi ihe mmetụta isi ga-anagide gburugburu ebe siri ike nke nrụgide anụ ahụ dịka ịpị igwe, ikuku ọkụ, na ịma jijiji ebe elektrọnik dị n'ime dịgidere na-enwe ike ịkọwa ozi site na ngwa elektrọnik ya dị nro. Ngwaahịa ndị a na-emechi usoro mkpakọ. A na-emechi akara iji guzogide nrụgide dị elu (ruo 3000 Ogwe) ma ya mere ọ dị mma maka ihe mmetụta nke ga-atachi obi n'ụdị ebe a. Jitai si ...
Ọdịdị Dị Elu Dị Ọcha Elu
A na-ejikarị ígwè akpụzi ọdịnala ọdịnala. Agbanyeghị, site na ịkpụzi ebu yana ebumnuche ha maka ụdị ebu a na - esiri ha ike ịbịaru ụdị ihe dị mgbagwoju anya ma jiri ihe mejupụtara rụọ ọrụ. Nke a bụ nsonaazụ nke ọnụọgụ ọkụ na-enweghị mmekorita dị n'etiti ebu n'onwe ya na ihe ndị edobere n'ime. Ya mere, graphite apụtawo dị ka ihe mbụ ịhọrọ maka ịkpụzi akpụzi n'ihi akụrụngwa ya na kemịkal ya chọrọ. Jitai na-ere enor ...
Jitai na-arụpụta mkpuchi mkpuchi nickel plasta nickel plated. Anyị na-eji alloy 4J42 na igwe anaghị agba nchara maka ngwaahịa ndị a nwere ike dakọtara na ntọala ọ bụla, dabere na ihe ndị ọrụ chọrọ.